Fitohizan'ny hafatra : Nehemiah> Misy mihintsy ny hoe samy manana ny loji...
voromailala - 17/07/2013 17:23
Nehemiah> Misy mihintsy ny hoe samy manana ny lojikany ary noho izany indrindra no nahatonga ny informatisianina mampiasa ny Logique Floue rehefa manao ny Intélligence artificielle izy.
Fa tsy hiditra lalina amin'izay aho fa sao lasa Erudit .
Milaza ianao fa tsy mitsara kanefa manoratra hoe ary tsy mitombina ny filazanao .
Amiko ny sarobidy rehefa mahatsiaro sambatra ianao amin'ny finoana arahanao dia izay.
niaina07 - 17/07/2013 17:30
marina mihitsy izany tenin ny baiboly ntenenin ny namatsika teo izany.ary mbola betsaka mihitsy ny manamarina izany ao am baiboly.tsy mety mihitsy izany mampirafy izany fa mapitondra alahelo sy ratram po an ilay olona iarahanao
niaina07 - 17/07/2013 17:31
Nehemiah - 18/07/2013 08:18
Nojereko ny rohinao, tsy milaza mihitsy ilay izy fa mifanohitra @ lôjika modale ilay izy, fomba 1 ialàna @ fetra binaire-n'ny lôjika modale. Tsy milaza mihitsy ilay izy hoe marina mandrakariva ny "post hoc ergo propter hoc".
voromailala Milaza ianao fa tsy mitsara kanefa manoratra hoe ary tsy mitombina ny filazanao .
Tsy mitsara anao aho (tsy ara-Baiboly izany) fa mitsara ny hevitra novoizinao (mifanaraka @ Jn. 7:24), hafa mihitsy izay. Tsy azonao raràna tsy hampiasa ny sainy @ fomba mitombina anie ny olona resahanao.
voromailala - 18/07/2013 09:38
Tsy hiditra lalina za fa noho ny fisalasalan'ny olombelona no nahatonga nanaisvana ny logique floue, izany hoe misy probabilité le fahamarinana na le fahadisoana. ohatra hoe marina à 70%, sns... Fantatro ohatra ny fahafataranao Baiboly io satria zavatra nianarako tany ampianarana.
Momba ny dikany hoe fitsarana samy manana ny azy isika, fa amiko izany dia mitsara ianao. Ny sarobidy dia ny hoe ny zavatra nosoratanao sy lazainao ve mandratra ilay olona sa tsia.
Nehemiah - 18/07/2013 09:52
Hmmm... Niteny zavatra izay faran'izay nanafintohina (satria marina) i Jesoa @ Jn. 6:53-66, tsy mety ve ny zavatra nataony ?
"Il n'y a que la vérité qui blesse" hoy ry zareo frantsay izay
voromailala - 18/07/2013 11:31
Nehemiah> Miverina kely amin'ny lohahevitra aho, rehefa mizara fitiavana, zavatsoa amin'ny manodidina anao ianao dia tonga ho azy ny fahasambarana.
Na inona na inona zavatra lazainao ahy dia hizarako fitiavana foana ianao.
Matetika ny olona mijaly dia olona tiantena, ary ny olona tiantena dia mijaly ihany koa.
bandykely - 18/07/2013 13:20
Mba mangataka antsika hiverina amin'ny sujet teo ambony azfd: inona aminao no atao hoe fahasambarana?
Lasa resaka Andriamanitra ranoray ilay izy ka mankaleo be. Mibirioka ilay resan-tsika ka tsy hitondra soa velively ho an'ny tsirairay.
Nehemiah>> Misaotra anao amin'ny hevitra narosonao. Hita tokoa fa convaincue ianao ary ny fahasambarana aminao dia Andriamanitra. Hevitra iray izay ary efa noraisin'ny rehetra na tsy voatery eken'ny rehetra aza. Tsy hi-imposer ny heviny, tsy hitompo teny fatratra ary tsy hitsara ny hafa anefa ny tena tanjona eto fa kosa ny mifanohitra amin'izay : ny handray, ny hifanakalo ary ny hivoy ny tsy fitovian-kevitra. Mba mangataka aminao raha mety hampisokatra kokoa ny loha-hevitra fa tsy hijanona coincé amin'Andriamanitra. Andao isika mba hanandrana haka recul kely fa tsy ho bouté amin'ny hevitra tokana. Raha sanatria moa ka tsy misy afa-ts'iny hevitra tokana iny ianao (fahasambarana = Andriamanitra) dia aza manahy fa efa voarainay tsara ny hevitrao.
smanantena - 18/07/2013 14:16
Rehefa namaky ny hevitra hifamaliana eo ambony aho dia hitako fa samy mazoto milaza ny heviny sy mamoaka ny ao ampony ny tsirairay, dia hita fa olona mahalala daholo, tsy tokony asiana olana izany fa samy manana ny heviny sy eritreriny io, anjaran’ny tsirairay ny mitazona na manaraka izay mety aminy. Raha ny eritreritro dia manahirana ny mamaritra oe inona no fahasambarana (iombonana) fa ny tsirairay dia samy manana ny zavatra mahasambatra azy izany hoe tsy mitovy avokoa ny olona rehetra fa ny mahasambatra ny olona iray mety tsy mahasambatra ny iray , noho izany tsy hitovy mihintsy ny fomba fijery fa samy manana ny azy io, amiko izao rehefa afaka miaina tsara aho (ara batana , saina, fanahy) , mahavita ny adidiko araka izay tratrako ( satria tsy misy ny tonga lafatra) eo @ ankohonana, fianankaviana, fiarahamonina, firenena ka eritreretiko hoe mety amiko izay dia sambatra aho
bandykely - 18/07/2013 14:56
Misaotra betsaka smanantena amin'ny valin-teny a.
moi - 18/07/2013 15:42
Ny atao hoe sambatra ?
Tonga amin'izay irinao ianao, nahazo izay nirina.
Mandalo ihany anefa izany satria tojo iny faniriana iny, mipoitra indray ny manaraka.
Fahaizana manaiky koa zany ilay izy e, fa raha tsy mahalala oniny dia tsy ho sambatra mihitsy.
Ao amin'ny Evanjely misy famaritana ny "sambatra" , izay mifanohitra amin'ny fihevitry ny nofo aza, satria ohatra hoe "Sambatra ny ory, fa ..." (tapahako fa tsy ampoizina ilay fijery e).
Ny antsika izany ilay sambatra fôpla no tanjona e !
Nehemiah - 18/07/2013 16:29
Voromailala >> Azafady aminao fa tsy voavaly mihitsy ny fanontaniako.
Bandykely >> Fahasambarana = firaisana velona @'Andriamanitra no tiako voizina ny tena marina. Angamba efa azon'ny ts11 tsara ny ohatr'i Buzz l'Éclair, sady @ maha-kristiana ahy tsy maintsy ny fomba fijery kristiana no voiziko.
Kanefa, satria "raison de vivre" no lohatenin'ny lohahevitra, tiako asiana fanampiny kely @ alalan'ity tantara ity :
nisy, hono, sipa nividy 4L t@ vola nangoniny mandritry ny 4 taona, ataontsika hoe Aina ny anarany. Nentiny nirimorimo tany @ RN 7 ilay izy.
Andeha isika hanao pause kely @ tantara : sambatra ve i Aina @'izao fotoana izao ?
Azontsika atao tsara ny mamaly hoe "Eny" ka tsy miteniteny foana, na dia fiarakodia tsy dia manahoana aza no entiny.
Kanjo voadonan'ny mpitondra kamiô mamo i Aina. Potika tsy misy ho raisina intsony ny 4L ary tapaka ny tongotr'i Aina 2. Entina @ hôpitaly izy, ary mijanona eo @ efitra, izay zary fonja ho azy. Na dia ny handeha hivoaka (hivalan-drano) aza dia tsy vitany fa tsy maintsy mangataka bassin. Voatery miatrika rééducation faran'izay sarotra sy mafy @ izy.
Pause faha-2, averina ny fanontaniana : sambatra ve i Aina @'izao fotoana izao ?
Angamba azo lazaina fa "tsia" no valiny mipoitra @ saina voalohany.
Ka inona izany no hataony ? Tsy misy dikany intsony ve ny fiainan'i Aina ? Tsy azo lavina fa very ny vola nisasarany nangonina mandritry ny 4 taona, tsy afaka mivezivezy intsony izy, tsy hisy lehilahy hanambady sipa kilemaina tahaka azy, sns. Ka tsy aleon'i Aina mamono tena ve ?
Kanefa tsy mba vita hatreo ny tantaran'i Aina. Tsy nilavo lefona mihitsy i Aina, satria notaizàna t@ finoana loterana ka nino izy fa mbola homen'Andriamanitra fitahiana be dia be sy ho avy mamirapiratra izy, na dia tsy nisy antony inona na antony inona tokony iheverany an'izay.
Niezaka fatratra izy t@ rééducation-ny, ka nanjary nahita fa nanana faharetana sy herim-po izay tsy nampoiziny izy, hany ka nihakaiky dia nihakaiky ny fotoanan'ny fahasitranany tanteraka. Tovolahy mailaka sy bikàna ny mpitsabo nikarakara azy, ary tsy ratsy koa i Aina, ka rehefa nahita ny herim-pon'i Aina ilay lehilahy dia raiki-pitia t@. Tsy vitan'izay fa nanonitra ny fahaverezan'ny 4L-ny ny assurances, hany ka nahazo vola ampy ividianana B.M.W. i Aina.
Farany dia sady nianatra ny faharetana sy ny herim-po i Aina no nahazo vady no nahazo fiarakodia tsara be (mba hafan'ny 4L kosa ny B.M.W. e ).
Tapitra ny tantara, averina farany ny fanontaniana : sambatra ve i Aina @'izao fotoana izao ?
Tsy vitan'ny "eny" ny valiny, fa ampiana hoe "sambatra lavitra nohon'ny t@ voalohany izy" .
Ka avelao kely aho mba hametraka fanontaniana vitsivitsy aminao :
- ny fahasambarana ankehitriny ve no zava-dehibe sa ny fahasambarana ankehitriny sy ho avy ?
- fahasambarana ihany ve izany fahasambarana mifototra @ tranga mihatra aminao androany, izay mety hivadika ho loza rahampitso ?
- iza no tena sambatra : ny olona izay tsy miankina afa-tsy @ herin'ny tenany, sa ny olona miankina @ teny fikasàna mahatalanjona nomen'Andriamanitra sy mahatoky Azy ? Torak'izay koa, ny aiza no mahasambatra : ny manana an'Andriamanitra ho mpanoro làlana sa ny manana Azy ho Ray ?
voromailala - 18/07/2013 17:23
Inona ilay fanontaniana, havereno mazava tsara eto?
Izao manana fanontaniana ihany koa ho anao?
"Fahasambarana = firaisana velona @'Andriamanitra no tiako voizina ny tena marina" hoy ianao.
Afaka hazavainao ve hoe ahoana no hatao "Pratique" no resahako (mivavaka,mamaky Baiboly, manao soa olona, sns...), ahatongavana amin'ilay firaisana velona amin'Andriamanitra?
Dia rehefa tafaray amin'Andriamanitra ve ianao dia miray foanafoana sa misy fotoana hoe miray dia misy fotoana tsy miray aminy?
sitlo - 19/07/2013 04:38
bandykely> io aloha dia fanontaniana mateti-pipetraka mihitsy raha filozofia no resahana.
Fa hoy ny baiboly izay, nahalala ny tsara sy ny ratsy i Abama sy Eva dia voaozona ny tany no vokany. Tsy ny baiboly ihany no misy an'io fa maro be mihitsy, na boky na filma na angano...
Fa ny foto-keviny dia izao, isika olombelona dia misaina ka miezaka mihevitra ny zava-drehetra. Ny sasany aza lasa miseho mahalala ny zavatra hitranga afaka tapitrisa taona any aoriana any... dia izay no itondrany ny fiainany ankehitriny. Ny sasany tsy miraharaha izany dia hafa koa ny itondrany fiainany... samy manao izay takatry ny sainy.
Fa izao no valiteniko, fa angaha moa tsy maintsy misy ilay raison de vivre? Velona ianao, tsy niteny hoe ateraho aho, ka ahoana no afaka taona vitsivitsy no lasa nisy hoe inona no antony ahavelomako? Satria efa vory ilay saina, efa lasa ny eritreritra, dia eo amin'izay no manomboka ny adihevitra (miafara amin'ny fifanambaniana sy ady sy fandratrana mihitsy aza).
Ka tsy mety ve ilay velona sy miaina fotsiny?
voromailala - 19/07/2013 09:29
sitlo> aminao izany tonga fotsiny teto antany isika tsy misy antony? teraka dia miaina dia maty dia miandry ny fitsarana farany sisa?
Nehemiah - 19/07/2013 09:53
Niteny zavatra izay faran'izay nanafintohina (satria marina) i Jesoa @ Jn. 6:53-66, tsy mety ve ny zavatra nataony ?
Tsia, ireny zavatra lazainao ireny dia tsy ahatongavana @'izany fa fampiharana ny efa ao anatintsika, izany hoe ny fiainana mandrakizay, ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, Izay efa nirahinao (Jn. 17:3).
Nehemiah - 19/07/2013 09:56
sitlo Fa izao no valiteniko, fa angaha moa tsy maintsy misy ilay raison de vivre? Velona ianao, tsy niteny hoe ateraho aho, ka ahoana no afaka taona vitsivitsy no lasa nisy hoe inona no antony ahavelomako? Satria efa vory ilay saina, efa lasa ny eritreritra, dia eo amin'izay no manomboka ny adihevitra (miafara amin'ny fifanambaniana sy ady sy fandratrana mihitsy aza).
Izay foana no anaovako hoe : raha tsy misy antony ny fiainana ary ny hivadika ho zezika sy sakafon'ny kankana ny perspective, tsy aleo ihany ve mamono tena ?
Raha ny resaka filôzôfia no jerena, nanamarina tsara i Descartes fa zava-dehibe ny hahatratra ny vivere beate
voromailala - 19/07/2013 11:30
Nehemiah> tsy nanafitohana ahy mihintsy, fa mampalahelo ahy fotsiny ny firesakao mitsara olona. Fa micomprendre anao aho satria ny sainao no nanao ireny fa tsy ianao.
Dia inona ilay fampiharana "concretement" hoe manao inona? mivavaka ve? sa hoe rehefa eken'ny sainao fotsiny hoe izy no fiainana mandrakizay dia miray amin'Andriamanitra ianao?
Raha izaho no hanontanianao momba ny fampiharana dia hoy zany hoe miezaka ho "Conscient" na "Présent" foana, izany hoe rehefa mandeha toerana be olona ianao dia henonao daholo ny fen'olona rehetra miteny, rehefa misakafo ianao dia henonao fofon sakafo, tsirony, henenao midina any amin'ny tendanao, sns...
dia rehefa mijery mijery olona na biby na olona tsisy misy tsikera,Manao méditation.
Izay no fampiharana amiko.
voromailala - 19/07/2013 11:31
Mimbokevitra amin'i Nehemiah izaho amin'izay fijery zay.
bandykely - 19/07/2013 13:57
sitlo>> Amiko, tsy mety ilay miaina fotsiny. Tsy maintsy misy tanjona amin'ny fiainana fa manjary mitovy daholo isan'andro isan'andro. Ilay miaka-midina mba hahatody any amin'ny tanjona napetraka iny no tena maha-fiainana ny fiainana